Mampiroborobo ny fahalalàna nifampiampita teo amin’ny taranaka sy ny fahavitan-tena ara-tsakafo ny fifanakalozana ambioka · Global Voices teny Malagasy
Miantoka ny fiandrianam-pirenena ara-tsakafo ny fikajiana ny ambioka
Voadika ny 31 Janoary 2022 4:50 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, Nederlands, Français, عربي, 日本語, नेपाली, Español
Lehilahy sy vehivavy mifanakalo ambioka ao Silvia (Cauca). Saripikan'i Giovanna Landazabal, nahazoana alalana.
Agrônôma avy amin'ny vahoaka vazimba Polindara, izay miaina ao amin'ny kaominina Totoro, 30 kilaometatra avy ao Popayán, ao Cauca, atsimon'i Colombia i Mónica Solarte. Nahazo fankatoavana araka izay anononana azy izay ny firenena vazimba Polindara tamin'ny taona 2014.
Mpampianatra amin'i Lisea i Solarte ary ao anatin'ny tetikasa antsoina hoe “Tsiro sy Fahalalàna” ao Polindara, izay mandrisika ny fihinanana ny fihinanana sakafo ao an-toerana tahaka ny celeri-karaoty (arracacha), vomanga, ary ny voamaina cacha.
Ho an'ny Polindara, ny fambolena mitandro tontolo iainana no miantoka ny fisian'ny sakafo ara-pahasalamana hohanina, mikojakoja ny rafi-pamokarana nentim-paharazana ary miantoka ny fiarovana ny fimaroan'ny ara-haiaina amin'ny alàlan'ny tanimboliny.
Any Kolombia — firenena izay, noho ny fanafarana entana any ivelany, dia mihavery ny fiandrianam-pireneny ara-tsakafo — fa manampy amin'ny fanarenana sy fitahirizana ny fahalalan'ny razambeny ny fifanakalozana masomboly. Endrika fanoheran’ny tantsaha sy ny vazimba teratany ihany koa izay mampahafantatra ny maha zava-dehibe ny fihinanana sakafo vokarin’ny tantsaha eto an-toerana.
Ao amin'ny vondrom-piarahamonina Solarte, mamboly voa kely ny olona ampiasainy hifanakalozana fa tsy amidy. Ankoatra ny fandraisana anjara amin'ny fiveloman'ny vondrom-piarahamonina, “ny fahalalana ny masomboly izay angoninay dia mifandray amin'ny fahaiza-mahandro hanim-py, haizavamanirim-poko, ary fitsaboam-biby araka ny foko, ny teknolojianay manokana ary ny fambolena”, hoy i Solarte.
Misy karazany roa ny zaridaina eo amin'ny fiaraha-monina misy azy: ny zaridaina eo akaikin'ny trano — izay ambolen'ny olona fanafody sy hazo fihinam-boa (toy ny arracacha, vomanga, koriandhra), ambolena kely hohanina isan'andro mandritra ny taona; sy ny cementera — tanimboly iray ambolena indray mandeha isan-taona, izay ahitana vokatra mifangaro katsaka, tsaramaso, voanjo, ovy ary “ulluco”.
Tamin'ny Septambra 2021, nanatrika fifanakalozana ambioka nokarakarain'ny fikambanana Las Delicias Botanical Garden, notarihin'ny Vazimba Misak ao Silvia (Cauca) i Solarte. Mino izy fa ilaina ny mitahiry ny masomboly, araka ny fanazavany amin'ny Global Voices fa “raha tsy lanin'ny mpamboly na tsy afaka mivarotra ny voa ny tantsaha, dia tsy nafafy izany ka very miaraka amin'ny fahalalana mifandraika amin'ilay ambioka.”
Tafiditra ao anatin’ny tetikasa roa karakarain'ny Zaridaina Haizavamaniry Las Delicias ity lanonana ity : ny tetikasa « Mpiambina ny tany », vatsian’ny Cultural Survival ; sy ny “A Ciencia Cierta” (“Fahalalana marina”), fifaninanana nandresen’ny Las Delicias Botanical Garden.
Karazan-katsaka sy ovy, ankoatra ireo sakafo hafa, ifanakalozana mandritra ny fotoana fanaovana izany, mba hiverenana amin'ny fomba nentin-drazana amin'ny fandevonana azy. Saripikan'i Giovanna Landazabal, nahazoana alalana.
Neken'i Solarte ny fanasan'i Giovanna Landazabal, biolojista avy amin'ny Oniversitem-Pirenena sady iray amin'ireo mpiara-miasa sy mpikarakara ny lanonana, izay manoritra fa iray amin'ny tanjon'ny lanonana ny hampihaonana ny fikambanana, mpiambina ary mpitahiry ambioka mba hifampizaran-dry zareo fahaizana mifandraika amin'ny fiarovana sy ny fikajiana.
Tanjona iray hafa ny hampahafantarana ny momba ny Las Delicias Botanical Garden, sy ny momba ny tetikasany ara-toekarena sy ara-pitantanany manokana, ny famerenana amin'ny laoniny ny fanao nentin-drazana, ary ny fiarovana ny zaratany. Noho izay antony izay dia iray amin'ny lahasa fanaony ny fitsidihana ny tanimbolom-pianakaviana sy ny “tranon'ambioka” (casa de las semillas), izay itehirizana ny karazan'ambioka.
Vahoaka Misak mivory hanao fifanakalozana ambioka, izay ahitana fahalalàn'ny razambe mifampiampita isa-taranaka. Saripikan'i Giovanna Landazabal, nahazoana alalana.
“Zava-dehibe ho an'i Julio Guauña, mpitahiry ambioka avy ao amin'ny tranon'ambioka Puracé (Cauca) ny nandray anjara tamin'ity lanonana ity. Mpiambina izay miezaka mitahiry sy mamerina amin'ny laoniny ny ambioka teratany izy, izay nitondra karazana ovy roa ambin'ny folo. Misy amin’ireo ihany koa no voatahirin’ny mpiaro ambioka sy ny Mama Misak Cayetana Almendra (…) ”, hoy ihany i Landazabal.
Amin'io tranon'ambioka io no ikendren'ny Zaridaina Botanika hitahirizana karazan'ovy, hamerenana ny ullucos, zavamaniry mamody ary karazana hafa izay nohanina taloha ary manan-danja teo amin'ny zaratany.
Manazava i Clara Sierra, avy ao amin'ny Minisiteran'ny Siansa, Teknolojia ary ny Famoahana Zavabaovao ny famolavolan'ny minisiterany programa “Hay (Siansa) marina ho Fampandrosoana an-Toerana“, izay mankatoa sy manohana ny tetikasan'ny fikambanan'ny vondrom-piarahamonina ao amin'ny firenena.
“Amin'ny maha-atidohan'ny teti-panorona azy, avoitran'ny fandaharan'asa ny paika fakan'ny fiarahamonina ny Fahalalana amin'ny alàlan'ny Siansa, ny Teknolojia ary ny famoahana zava-baovao. Tsinjarazarain'ity tetika ity amin'ny alalan'ny fahalalana akademika ny fahalalana eo an-toerana sy nolovaina tamin'ny razana mba hananganana fahalalana vaovao amin'ny odidina (toe-javatra) manokana, ka hahatanteraka ny tanjony hanamafisana ny fitantanana ny vondrom-piarahamonina sy ny fampandrosoana mba hanatrarana ny fiovana eo an-toerana, “hoy i Sierra.
Asongadin'i Sierra fa mandray anjara amin'ny fiandrianam-pirenena ara-tsakafo ny fambolena mitandro voary sy ny fikajiana ambioka ary mamerina ilaoniny ny fahalalan'ny razana izay miantoka ny fahasoavan'ny vondrom-piarahamonina.
“Vaindohan-draharahan'ny vondrom-piarahamonina ny fampiasana ambioka teratany izay mahasoa hatrany. Ny fifanakalozana eo amin'ny vondrom-piarahamonina sy ny tombotsoan'ny fampifanarahana no hanasongadina ny ezaky ny vondrom-piarahamonina amin'ny fiarovana amin'ny fampiasana ambioka isaky ny zaratany,” hoy i Sierra nanantitrantitra.